Saints Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang na ndị enyi dị nsọ nke ụbọchị maka Septemba 20 | Blọọgụ nke ekpere
Saints Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang na ndị enyi dị nsọ nke ụbọchị maka Septemba 20
(21 Ọgọst 1821 - 16 Septemba 1846; Compagni d. N'etiti 1839 na 1867)
Saints Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang na Mkpakọrịta Akụkọ
Onye isi ala Korea nke mbu, Andrew Kim Taegon bu nwa ndi Christian tọghatara. Mgbe Andrew mechara baptizim mgbe ọ dị afọ iri na ise, ọ gara otu puku kilomita na narị atọ gaa seminarị na Macau, China. Mgbe afọ isii gasịrị, ọ jisiri ike laghachi Manchuria na obodo ya. N'otu afọ ahụ ọ gafere Osimiri Yellow gaa Shanghai ma bụrụ onye nchụàjà. Mgbe ọ lọghachiri ụlọ, e kenyere ya ịhazi ntinye nke ndị ozi ala ọzọ ndị ọzọ site n'okporo ụzọ mmiri ga-agbanahụ ndị na-eche nche n'ókè. E jidere ya, mekpọ ya ọnụ ma mechaa gbupụrụ ya isi na Osimiri Han n'akụkụ Seoul, isi obodo ahụ.
Nna Andrew, Ignatius Kim, nwụrụ n'ihi okwukwe ya na mkpagbu nke 1839 ma bụrụ nke e meriri na 1925. Paul Chong Hasang, onye nkịtị onyeozi na nwoke lụrụ nwanyị, nwụrụ na 1839 mgbe ọ dị afọ 45.
Otu n'ime ndị ọzọ nwụrụ n'ihi okwukwe ha n'afọ 1839 bụ Columba Kim, nwaanyị dị afọ iri abụọ na isii na-alụbeghị di. Ẹkesịn enye ke ufọk-n̄kpọkọbi, ẹda mme n̄kpọ emi ẹdade ikan̄ ẹta enye, ẹfọp enye ke ikan̄. E yipụrụ ya na nwanne ya nwanyị bụ́ Agnes uwe wee nọrọ ụbọchị abụọ n’ụlọ mkpọrọ ya na ndị omekome a mara ikpe ma ọ dịghị akpagbu ha. Mgbe Columba mere mkpesa banyere mmechuihu, enweghị ndị ọ bụla metụtara. Egbupụrụ ha abụọ isi. Peter Ryou, nwata nwoke gbara afo iri na ato, anu aru ya nke ukwuu nke na o nwere ike dinaa ma tufue ya ndi ikpe. Egbugbu ya gburu ya. Protase Chong, onye dị afọ 26, amaara n'ezi ofufe ma hapụ ya. O mechara lọghachi, kwuputa okwukwe ya ma taa ya ahụhụ ọnwụ.
Iso Christianityzọ Kraịst rutere Korea n'oge mwakpo ndị Japan na 1592 mgbe ụfọdụ ndị Korea mere baptizim, ikekwe ndị agha Japan ndị Kraịst. Angelkpọsa ozi ọma esiri ike n'ihi na Korea ajụla ịkpọtụrụ ndị ụwa na-abụghị ụtụ isi na Beijing kwa afọ. N'otu oge dị otú ahụ, n'ihe dị ka 1777, akwụkwọ Ndị Kraịst nke ndị Jesuit na China nwetara dugara Ndị Kraịst Korea gụrụ akwụkwọ ịmụ ihe. Otu ụlọ ụka malitere. Mgbe otu ụkọchukwu onye China jisiri ike banye na nzuzo afọ iri na abụọ gasịrị, ọ hụrụ ndị Katọlik 4.000, ọ dịghị onye ọ bụla hụtụrụla ụkọchukwu. Afọ asaa ka e mesịrị, e nwere ndị Katọlik 10.000. Nnwere onwe okpukpe batara na Korea na 1883.
Na mgbakwunye Andrew na Paul, Pope John Paul II chiri mmadụ 98 Koreans na ndị ozi ala ọzọ France atọ bụ ndị e gburu n'ihi okwukwe ha n'agbata 1839 na 1867, mgbe ọ gara Korea na 1984. Otu n'ime ha bụ ndị bishọp na ndị ụkọchukwu, mana maka ọtụtụ bụ ndị ọrụ ego: ụmụ nwanyị 47 na ụmụ nwoke 45.
Ọ na-eju anyị anya na Chọọchị Korea bụụrụ Chọọchị nke ụwa kemgbe afọ iri na abụọ mgbe amụrụ ya. Kedụ ka ndị mmadụ si bie ndụ na-enweghị Oriri Nsọ? Ọ dịghị eweda nke a na sakrament ndị ọzọ ịghọta na a ga-enwerịrị okwukwe dị ndụ tupu enwee emume Oriri Nsọ nke ga-aba uru n'ezie. Sacrament ndi ahu bu ihe iriba ama nke atumatu Chukwu na nzaghachi n'okwukwe ndi di ugbua. Sacrament ahụ na-abawanye amara na okwukwe, mana ọ bụrụ naanị na enwere ihe dị njikere ịmụba.
← Na post gara aga Gara aga post:Chee echiche taa na ọkwa nke itinye aka na okwukwe gị
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 20 Septemba 2020 na okwu Pope Francis